संधिवात - Found.net
श्रेणीका लागि अभिलेख: संधिवात
26 / 03 / 2022 /i rheumatism/av भोंड्ट
वसन्त एक समय हो जुन हामी मध्ये धेरैले प्रशंसा गर्छौं, तर बाथ रोग भएकाहरूले अक्सर यसको अतिरिक्त प्रशंसा गर्छन्। यसको मतलब यो हो कि बाथ रोग निदान भएका धेरैले अस्थिर मौसम, हावाको चाप परिवर्तन र तापक्रमको उतारचढावमा प्रतिक्रिया दिन्छन्।
वात रोग विशेषज्ञहरूले मौसम परिवर्तनहरूमा प्रतिक्रिया दिन्छ भनेर अनुसन्धानमा राम्रोसँग दस्तावेज गरिएको छ (1). अध्ययनहरूले देखाएको छ कि विभिन्न प्रकारका बाथ रोगहरू निश्चित प्रकारका मौसम परिवर्तनहरूबाट बढी प्रभावित हुन्छन् - यद्यपि हामी यो स्पष्ट गर्छौं कि यो व्यक्तिगत रूपमा पनि फरक हुन सक्छ।
- तपाईंले प्रतिक्रिया दिनुहुने मौसमका कारकहरू फरक हुन सक्छन्
उदाहरणका लागि, यो देखाइएको छ कि हावाको चाप र तापमान परिवर्तनहरूले विशेष गरी रुमेटोइड गठिया भएकाहरूलाई असर गर्छ। तापक्रम, वर्षा र ब्यारोमेट्रिक दबाब विशेष गरी गठिया भएकाहरूका लागि बिग्रनसँग जोडिएको थियो। फाइब्रोमायल्जिया भएका बिरामीहरूले विशेष गरी ब्यारोमेट्रिक परिवर्तनमा प्रतिक्रिया देखाए - जस्तै जब मौसम कम दबावबाट उच्च दबावमा जान्छ (वा यसको विपरीत)। तपाईंले प्रतिक्रिया दिन सक्ने अन्य कारकहरू आर्द्रता र समयसँगै मौसमको स्थिरता हुन्।
राम्रो र द्रुत सुझावहरू: लामो हिड्ने संग सुरु गर्नुहोस् लेखको धेरै तल, तपाईं खुट्टा दुखाइको लागि व्यायाम अभ्यासको साथ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी आत्म-उपायहरू (जस्तै बाछो कम्प्रेसन मोजा og प्लानर फासीआइटिस कम्प्रेशन मोजे)। लिङ्कहरू नयाँ विन्डोमा खुल्छन्।
- ओस्लो मा Vondtklinikkene मा हाम्रो अन्तःविषय विभागहरु मा (Lambertseter) र Viken (Eidsvoll ध्वनि og Råholt) हाम्रा चिकित्सकहरूसँग पुरानो दुखाइको मूल्याङ्कन, उपचार र पुनर्वास प्रशिक्षणमा विशिष्ट रूपमा उच्च व्यावसायिक क्षमता छ। लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस् वा यहाँ हाम्रा विभागहरूको बारेमा थप पढ्नको लागि।
मौसम संवेदनशीलता के हो?
यसैले, वसन्त वात रोगीहरूको लागि उत्कृष्ट समय हो
कसरी मौसम संवेदनशीलताले खराब अवधिहरू ट्रिगर गर्न सक्छ
मौसम परिवर्तन विरुद्ध स्व-उपचार र राम्रो सल्लाह
'पुरानो दिनहरूमा' प्रायः 'म गाउटमा महसुस गर्छु' भन्ने अभिव्यक्ति सम्झन्छु। हालैका समयमा, यो कुनै पनि शङ्का बाहिर साबित भएको छ कि मौसम कारकहरूले वास्तवमा वात रोग विशेषज्ञहरू बीच दुखाइ र लक्षणहरूलाई असर गर्न सक्छ।2)। यी कारकहरू समावेश छन्, तर सीमित छैनन्:
ब्यारोमेट्रिक चाप (वायुको चाप)
हावाको चाप परिवर्तन हुन्छ
बारम्बार मौसम परिवर्तन
उल्लेख गरिए अनुसार, बाथ रोगको निदान भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न मौसमी कारकहरूमा फरक प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। एउटै निदान भएकाहरूमा भिन्नताहरू हुन्छन्। कतिपय मानिसहरूले वर्षा बढ्दा र आर्द्रता बढ्दा मांसपेशीको दुखाइ र जोर्नीहरूमा कठोरता बढेको अनुभव गर्न सक्छ। अरूले यसलाई टाउको दुखाइ र अन्य बाथ लक्षणहरूको बढ्दो घटनाको रूपमा महसुस गर्न सक्छन्।
वसन्त प्रायः अधिक स्थिर मौसम हो, उदाहरणका लागि, शरद र जाडो। यसका साथ, हामी यो पनि सोच्दछौं कि बाथ रोग भएका धेरै व्यक्तिहरूले धेरै चिसो मौसम र वर्षाको बढ्दो घटनाहरू (वर्षा र हिउँ दुवैको रूपमा) प्रतिक्रिया गर्छन्। यसैले, यो एक मौसम हो जुन बाथ रोग विशेषज्ञहरु को लागी राम्रो उपयुक्त छ। त्यहाँ धेरै सकारात्मक कारकहरू छन् जसले यस सिजनलाई राम्रो बनाउँछ:
अधिक आरामदायक तापमान
अधिक दिनको उज्यालो र घाम
सक्रिय हुन सजिलो छ
'चट्याङ' को प्रकोप घट्यो
अन्य चीजहरूको बीचमा, हामी मौसम डेटा हेर्न सक्छौं कि ओस्लोमा औसत आर्द्रता जनवरी र फेब्रुअरीमा क्रमशः 85% र 83% बाट जान्छ - मार्च र अप्रिलमा 68% र 62% (3)। धेरै वात रोग विशेषज्ञहरूले पनि जीवनको गुणस्तर बढेको र मौसमको तापक्रम औसत उच्च स्तरमा स्थिर हुँदा लक्षणहरूमा कमी आएको रिपोर्ट गर्छन्। यो पनि दिनहरूमा उज्यालो हुन्छ र तपाइँसँग घाममा अधिक पहुँच छ भन्ने पनि दुई धेरै सकारात्मक कारकहरू हुन्।
कसरी मौसम संवेदनशीलताले बाथ विकार ट्रिगर गर्न सक्छ
यद्यपि यस क्षेत्रमा अनुसन्धान पहिले भन्दा राम्रो छ, त्यहाँ अझै पनि हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ राम्रो अनुसन्धान अध्ययनहरू छन् जसले मौसम र मौसमहरू बीचको लिङ्कलाई बाथ लक्षणहरूको प्रभावसँग दस्तावेज गरेको छ। तर हामी किन पक्का छैनौं। यद्यपि, त्यहाँ धेरै सिद्धान्तहरू छन् - निम्न सहित:
ब्यारोमेट्रिक हावाको चापमा परिवर्तन, उदाहरणका लागि कम चापमा, टेन्डन, मांसपेशी, जोर्नी र संयोजी तन्तुहरू संकुचित हुन सक्छ। यसले गर्दा बाथ रोगबाट प्रभावित तन्तुहरूमा दुखाइ हुन्छ।
कम तापक्रमले सिनोभियल सिनोभियल फ्लुइडको मोटाई बढाउन सक्छ जसले जोर्नीहरूलाई कडा बनाउँछ।
मौसम खराब र चिसो हुँदा तपाई सामान्यतया कम सक्रिय हुनुहुन्छ। दैनिक जीवनमा कम आन्दोलनले लक्षण र दुखाइ बढाउन सक्छ।
ठूला मौसम परिवर्तन र राम्रो गर्जनले अक्सर हाम्रो मुडमा असर पार्छ। हामीलाई फेरि थाहा छ कि यदि तपाइँ निराश महसुस गर्नुहुन्छ भने, यसले ज्ञात दुखाइ र लक्षणहरूलाई तीव्र पार्न सक्छ।
अनुसन्धान जर्नल नेचरमा प्रकाशित 2658 सहभागीहरूसँगको ठूलो अध्ययनले यी निष्कर्षहरूलाई समर्थन गर्‍यो (4). यहाँ, सहभागीहरूलाई दुखाइ, लक्षणहरू, बिहानको कठोरता, निद्राको गुणस्तर, थकान, मुड र गतिविधिको स्तर नक्सा गर्न भनियो।
नतिजाहरूले महत्त्वपूर्ण देखाए, यद्यपि मध्यम, रिपोर्ट गरिएको दुखाइ र आर्द्रता, ब्यारोमेट्रिक दबाव र हावा जस्ता कारकहरू बीचको सम्बन्ध। तपाईंले यो पनि देख्नुभयो कि कसरी यो फेरि सहभागीहरू बीचको मुड र शारीरिक गतिविधि दुवै भन्दा बाहिर गयो।
यहाँ हामी मौसम परिवर्तन विरुद्ध हाम्रा आफ्नै उपायहरूका लागि केही सुझावहरू लिएर आएका छौं। तपाईंहरू मध्ये धेरैलाई सायद यसका धेरै कुराहरू थाहा छ, तर हामी अझै आशा गर्छौं कि तपाईंहरू मध्ये धेरैले केही सल्लाहबाट लाभ उठाउनुहुनेछ।
मौसम परिवर्तन विरुद्ध सल्लाह
मौसमको लागि पोशाक - र सधैं अतिरिक्त तहहरू ल्याउनुहोस्। बाथ रोग भएका धेरै व्यक्तिहरूले दिनको समयमा चिसो घाउ र तापमान परिवर्तन अनुभव गर्छन्। त्यसैले यसलाई ध्यानमा राख्नको लागि अतिरिक्त कपडा ल्याउनु विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं यात्रामा जाँदा स्कार्फ, टोपी, पन्जा र राम्रो जुत्ता ल्याउनुहोस् - मौसम स्थिर देखिन्छ भने पनि।
कम्प्रेसन मोजा र कम्प्रेसन ग्लोभहरू लगाउनुहोस्। यी कम्प्रेसन कपडाहरू हुन् जुन हात र खुट्टामा परिसंचरण कायम राख्न विशेष गरी बनाइन्छ, जसले तपाईंलाई तापमान कायम राख्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू धेरै प्रकारका दस्ताने र mittens अन्तर्गत राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
गतिविधि स्तर कायम राख्नुहोस्। शरद ऋतु र जाडो जस्ता चिसो मौसमहरूमा, हामीसँग कम सक्रिय हुने थकित प्रवृत्ति हुन्छ। तर हामीलाई थाहा छ कि लक्षणहरू नियन्त्रणमा राख्न शारीरिक गतिविधि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हिड्ने, बलियो तालिम र स्ट्रेचिङ व्यायामले तपाईंलाई दुखाइ र कठोरतामा मद्दत गर्न सक्छ।
भिटामिन डी को स्तर कम छ? हामी मध्ये धेरैलाई अँध्यारोको समयमा र पछि भिटामिन डीको स्तर कम हुन्छ। यदि तपाइँलाई यो तपाइँलाई पनि लागू हुन सक्छ भन्ने शंका छ भने तपाइँको जीपीसँग कुरा गर्नुहोस्।
गर्मी उपचार प्रयोग गर्नुहोस्: पुन: प्रयोज्य गर्मी प्याक र/वा तातो स्नानले तपाईंलाई मांसपेशीको तनाव र जोर्नीहरू कडा पार्न मद्दत गर्न सक्छ।
टिप १: खुट्टा, खुट्टा र हातका लागि कम्प्रेसन कपडा
कम्प्रेसन कपडाको प्रयोग एक सरल आत्म-मापन हो जुन प्रयोगको सम्बन्धमा राम्रो दिनचर्याहरू प्राप्त गर्न सजिलो छ। तलका एड्सका सबै लिङ्कहरू नयाँ रिडर विन्डोमा खुल्छन्।
खुट्टा कम्प्रेसन मोजा (खुट्टा क्रम्प्स विरूद्ध प्रभावी)
प्लान्टार F্যাসite कम्प्रेशन मोजे (खुट्टा दुखाइ र प्लान्टार फासिइटिसको लागि राम्रो)
माथिको लिङ्कहरू मार्फत तपाईंले आत्म-उपायहरू बारे थप पढ्न सक्नुहुन्छ - र खरीद अवसरहरू हेर्नुहोस्।
सुझाव १: पुन: प्रयोज्य हीट प्याक
दुर्भाग्यवश, मांसपेशी तनाव र संयुक्त कठोरता दुई चीजहरू छन् जुन गठियासँग जोडिएको छ। त्यसैले हामी सबै बाथ रोग विशेषज्ञहरूलाई मल्टिप्याक उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्छौं। तपाइँ यसलाई केवल तातो गर्नुहुन्छ - र त्यसपछि तपाइँ यसलाई विशेष गरी तनावपूर्ण र कडा क्षेत्रको बिरूद्ध राख्नुहुन्छ। प्रयोग गर्न सजिलो।
पुरानो मांसपेशी र जोर्नी दुखाइ को उपचार
यो विशेष गरी अचम्मको कुरा होइन कि पुरानो दुखाइ भएका धेरै व्यक्तिहरूले शारीरिक उपचार खोज्छन्। धेरै रिपोर्टहरू उपचार प्रविधिहरूको राम्रो र सुखदायक प्रभावहरू जस्तै मांसपेशी गाँठ उपचार, इन्ट्रामस्कुलर एक्यूपंक्चर र संयुक्त गतिशीलता।
के तपाइँ पेन क्लिनिकहरूमा परामर्श चाहनुहुन्छ?
हामी तपाईंलाई हाम्रो एउटा सम्बद्ध क्लिनिकमा आकलन र उपचारको लागि सहयोग गर्न खुसी छौं। यहाँ तपाइँ हामी कहाँ अवस्थित छौँ भनेर एक सिंहावलोकन हेर्न सक्नुहुन्छ।
थप जान चाहने तपाईका लागि व्यायाम र प्रशिक्षण
सायद तपाईलाई यो वसन्तमा धेरै वा लामो हिँड्ने इच्छा छ? यहाँ हामी 13 मिनेट लामो व्यायाम कार्यक्रम देखाउँछौं जुन मूल रूपमा हिप ओस्टियोआर्थराइटिस भएकाहरूका लागि बनाइएको थियो। याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईं भुइँमा उठ्न र तल उठ्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, कार्यक्रमको त्यो भाग उभिएको हुन सक्छ। हामी तपाईंलाई भिडियोमा हामीसँग पछ्याउने र तालिम दिने प्रयास गर्न सुझाव दिन्छौं - तर यदि तपाईंले यसलाई समान गति वा गतिमा गर्न सक्नुहुन्न भने यसले राम्रो काम गर्छ। यो अभ्यास कार्यक्रम तपाइँको टिभी वा पीसी मा राख्न को लागी बानी बनाउन प्रयास गर्नुहोस् - अधिमानतः हप्तामा तीन पटक। यस लेखको तलको टिप्पणी खण्डमा वा हाम्रो Youtube च्यानलमा हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईंसँग प्रश्नहरू छन् भने हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ।
भिडियो: हिप्स र पछाडिको लागि 13 मिनेट व्यायाम कार्यक्रम
1. Guedj et al, 1990. बाथ रोगीहरूमा मौसम अवस्थाको प्रभाव। एन रियम डिस। 1990 मार्च; 49 (3): 158-9।
2. Hayashi et al, 2021। फाइब्रोमायल्जिया भएका बिरामीहरूमा जीवनको गुणस्तरसँग सम्बन्धित मौसम संवेदनशीलता। BMC Rheumatol। २० मे २१; ५ (१): १४।
ओस्लो मा मौसम र औसत मौसम। 3-2005 अवधिमा सङ्कलन गरिएको मौसम पूर्वानुमानमा आधारित।
4. Dixon et al, 2019। कसरी मौसमले स्मार्टफोन एप प्रयोग गरेर नागरिक वैज्ञानिकहरूको पीडालाई असर गर्छ। Npj अंक। संग। २, १०५ (२०१९)।